सुन प्रतितोला ६० हजार पुग्यो
Posted: 2018-10-12 14:19:06
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - दसैँ नजिकिँदै गर्दा सुनको मूल्य बढेको छ। शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला ६० हजार पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला ७ सय रुपैयाँले सुनको मूल्य बढेको हो। असोज १२ गते प्रतितोला ५७ हजार ७ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो। त्यसयता क्रमिक रुपमा सुनको मूल्य महँगिएको छ। गत वर्षको दसैँताका साढे ५५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा सुनको कारोबार भएको थियो। महासंघका पूर्व अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यका अनुसार नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा सुनको मूल्यमा प्रभाव देखिएको हो। डलर बलियो हुँदा सुनको मूल्य पनि बढेको हो उनले भने अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमै पनि सुनको मूल्यमा वृद्धि देखिएको छ। दसैँका बेला सुनको माग उच्च हुने गर्दछ। हाल दैनिक औसत ४० केजी बढी सुनको माग रहेको शाक्यले जानकारी दिए।
वाणिज्य बैंकहरुले मंसिरसम्म दैनिक २५ केजी सुनको आयात गर्न पाउने व्यवस्था हालै गरिएको छ। यद्यपी बजारमा सुनको अभाव भने उस्तै रहेको शाक्यले बताए। चाडपर्वका कारण सुनको अभाव उस्तै छ उनले भने। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब २० करोड रुपैयाँको सुन आयात भएको छ। बर्सेनी सुन आयात बढ्दै गएको पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ। अघिल्लो आवमा २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको सुन भित्रिएको थियो। आयातित परिमाण बढ्नुका साथै मूल्य समेत बढेकाले चालु आर्थिक वर्ष सुनका लागि बाहिरिने रकम झनै बढ्न सक्नेछ।
सुन आज प्रतितोला ५८ हजार ७ सयमा कारोबार
Posted: 2018-12-06 12:42:12
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौ - सुन आज प्रतितोला ५८ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजो ५८ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। हिजोको तुलनामा सुन प्रतितोला ३ सय रुपैयाँ बढेको हो। ...
Posted: 2018-12-04 12:44:42
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौ - त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय बिमानस्थलको पार्किङ एरियाबाट सुन जस्तो देखिने पहेंलो धातुको बाला ३ थान (अन्दाजी १ सय ५० ग्राम) सहित धनुषा गणेशमान नगरपालिका ४ घर भएका २० वर्षीय शकिल महमदलाई ...
सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु सहित पक्राउ
Posted: 2018-11-29 13:51:31
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौ -त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय बिमानस्थलको अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान तर्फको पार्किङ एरियाबाट नुवाकोट दुईपिपल ३ बस्ने २४ वर्षीय पर्शुराम भण्डारीलाई सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु करिब १ सय ४९ ग्राम संकलन ...
Posted: 2018-11-29 11:48:47
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौ - नेपाली बजारमा आज सुन सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट । मङ्गलबार प्रतितोला रु ५८ हजारमा कारोवार भएको ‘पहेँलो धातु’ आज घटेर प्रतितोला रु ५७ हजार ६०० मा कारोवार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी ...
एपीएफ टोलीद्वारा धनुषामा करीव ८ के.जी. चाँदि बरामद
Posted: 2018-11-23 13:49:03
सुनाखरी न्युज/ धनुषा - धनुषा जिल्लाको जनकपुर उपमहानगरपालिका २५ स्थित लोहनाबाट मंसीर ५ गते एपीएफ टोलीले करीव ८ के.जी दानादार चाँदि बरामद गरेको छ । त्यस वेला ज ११ प. ६००० नम्बरको मोटरसाइकलमा नेपालबाट ...